Ogaden News Agency (ONA) – Sanadwalba ku Ciida Farxad – Ilaahay haka soo daayo dadka cadaalada darada ugu xidhan xabsiyada Itobiya
Sanadwalba ku Ciida Farxad – Ilaahay haka soo daayo dadka cadaalada darada ugu xidhan xabsiyada Itobiya
Waxaan dhamaan Muslimiinta Caalamka gaar ahaan xubnaha Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya, Gude iyo dibadba, shacbka Somaliyeed ee Ogadenya iyo guud ahaan Umadda Somaliyeed meel ay joogaanba ugu hambalyaynayaa Ciida Barakaysan ee Adxaa, waxaanan Ilaahay ka baryayaa inuu nooga dhigo ciid barakaysan. Waxaan Ilaahay uga baryayaa intii soo xajiday inuu Ilaahay ka aqbalo oy ku soo nabad noqdaan reerahoodii iyagoo helay Dambi dhaafkii uu Ilaahay u balan qaaday.
Maalintan weyn ee dhamaan muslimiinta ay ku ciidayaan farxadda, wa xaa ka socda dalkeenii gaboodfal aan caalamka meel uu ka socdo isagoo kale jirin, haduu jirana uu yahay wax la ogyahay oo caalamka oo idil uu wada arko. Hasa ahaatee Itobiya oo waligeedba ahayd meel caalamka kale ka oodan, waxay dalkeena ku soo rogtay cunaqabateen dhanwalba ah si aan loo ogaanin dhibka iyo xasuuqa ay ku hayso dadka shacabka ah een waxba galabsan. Waxaan la soconaa labadii wariye ee dalka Sweden ee damcay inay si qarsoodi ah ku galaan dalka Ogadenya markay ka waayeen ogolaansho Itobiya inay soo saartey Itobiya maxkamad beenaad oy ku xukuntay 11 sano oo xabsi adag ah, taasoo laga daawanayo hadda caalamka Filimka wathaa’iqi ah ee laga sameeyay dhibaatada loo gaystay labadaa wariye iyo gaboodfalada lagu hayo shacabkeena. Inkastoo Itobiya ay isku dhabar jabisay inay qariso tacdiyada ka socda dalkeeda, hadana caalamka wax badan kama qarsoona, waana ku guulaysanay ilaa heer in aan caalamka u soo bandhigno gaboodfaladaa, oon gaadhsiino haya’adaha qaabilsan.
Waxa ka socda jeelasha Ogadenya gaar ahaan Jeelka la magacbaxay Jeel Ogaden waa fadeexada casrigan, mana ahaan doonto arin waligeed qarsoonaata oo aan cadaaladda la hor keenin jenanada Itobiyaanka ah iyo kuwa ay ku adeegtaan ee dadka shacabka ah ku laynaya xabisyada la midka ah kuwii Naziga. Ilaahay Waxaan ka baryaynaa inuu boqolaalka cadaalad darada u xidhan ee ku dhibaataysan xabsiyada gumaysiga Itobiya ka soo daayo iyagoo badqaba.
Guul iyo Gobanimo – Ciid Wanaagsan dhamantiin.
Adm. Maxamad Cumar Cisman / Gudoomiyaha JWXO.